အမှောင်မှာလိုနေတယ် | ဥက္ကာကိုကို
အမှောင်မှာလိုနေတယ်	Posted by oakkarkoko on April 27, 2010
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: ဆေးကွဲပြီးရေးတဲ့ကဗျာ.	Leaveacomment
အံကြိတ် သမ်းဝေ တက်ခေါက် ရီဝါး
အနာဂတ်? ဘာတွေလဲ အာရုံများတယ်
အခုလိုနေတယ် ၊ လိုတာတွေအများကြီးကို
ဘာကိုမှ ကိုင်တွယ် စမ်းသပ် ထိတွေ့လို့မရတဲ့
ညဟာ ကြယ်တွေ အပြိုးလိုက် အပြက်လိုက်။
← ကဗျာဝိုင်ပုလင်းအားဖွင့်ကြည့်ခြင်း	ကျနော်နှင့်ကဗျာတိုလေးများ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...